Xaflad lagu soo dhoweynaayo Wasiirka Hawlaha Guud, dib-u-dhiska iyo guryeenta oo lagu qabtay London, UK
Xaflad soo dhoweynta Mudane Jeylani Nur Ikar Wasiirka Hawlaha Guud, dibu dhiska iyo guryeenta oo lagu qabtay London, UK
February 27, 2012 Markacadeey
Xaflad si fiican loo soo diyaariyay oo lagu soo dhoweynaayo Wasiirka Hawlaha Guud, Dib-u-dhiska iyo Guriyeenta, Mudane Jeylaani Nuur Iikar ee Dawladda Federaalka Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaala madaxda dalka Ingiriiska, London.
Xafladdaas oo si wada jir ah u soo qabanqaabiyeen Odeyaasha, Wax-garadka iyo Dhalinyarada reer Banaadir ee UK, waxaa ka soo qayb galay xubno aad u fara badan ee Qowmiyadda reer Banaadir ee dalka Ingiriiska iyo qoysaskooda.
Ka soo qaybgaleyaasha oo tiradooda lagu qiyaasay wax ku dhow 300 qof, waxaa ka mid ahaa Takhaatiir, Ingineero, Xirfadleyaal, Ganacsato waaween iyo yar-yar. Waxaa asigana marti sharafta ka mid ahaa milkiilaha oo isla markaanna ah agaasimaha Televisionka caanka ah ee Universal, Ing. Axmed Abubakar.
Sidoo kale, waxaa marti-sharafta ka mid ahaa Wasiirka Arrimaha Dibadda ee DFS, Mudane Cabdullahi Xaaji Xasan, Xildhibaan Sharif Maxamed Sayidi iyo marti sharaf kale.
Asigoo ka hadlaayo munaasabada, oo ay ka soo qayb galeen boqolaallo qof oo isugu jira rag iyo dumar, Wasiirka Arrimaha Soomaaliya, Mudane Cabdullahi Xaaji , waxuu ka mahad celiyay martiqaadka loo fidiyay in uu ka soo qayb galo xafladda Reer Banaadir oo lagu soo dhoweynaayay Wasiir Jeylani. Wasiirka Arrimaha Dibadda, Mudane Cabdullahi Xaaji Xasan waxuu ka hadlay xiriirka iyo wada-shaqeynta ka dhaxeeya asiga iyo Wasiirka Hawlaha Guud, Dib-u-dhiska iyo Guryeenta, Mudane Jeylaani Nuur Iikar.
Kaddib waxaa khudbado ka jeediyay xafladda ka soo qaybgalayaal badan oo ay ka mid ahayd, Amina Khalid Macow, oo ku hadlashay magaca gabdhaha. Amina hadaleeda waxaa ka mid ahaa baraarujin ay u jeedisay Reer Baaadir in ay gacmaha is qabsadaan si, si wadajir ah, u gaaraan hadafkooda. “Maxaa yeelay”, ayay tiri Amina, “Far keligeeda fool ma dhaqdo”.
Barnaaamijka xafladda kuma ekeen khudbado kali ah, waxaa asigana hees xamaasad xambaarsan ku heesay, al-Ustaad Axmed Naaji Sacad oo si aan kala go’ layan loogu sacab tumay.
Ugu dambeystii, waxaa mikrofoonka lagu soo dhoweeyay, Wasiirka Hawlaha Guud, Dib-u-dhiska iyo Guryeen, Mudane Jeylaani Nuur Iikar, oo martida munaasabada joogtay ay sugaayeen in ay ka dhegeystaan war iyo waano.
Kaddib markii uu u sheegay dadkii halkaas isugu yimid inay soo dhoweeyaan sida xaaladda dalka hooyo ku suganyahay iyo waxii hor-u-mar ah ay dawladda Federaalka ka gaartay dhinacyada kala duwan oo sugitaanka amaanka ugu horeyso.
Wasiirka waxuu u sheegay ka qayb galeyaasha xafladda in loo baahanyahay in ay gacan ka geystaan dib-dhiska dalka oo ay dalka ku soo noqdaan si, si toos ah khibraddooda ay uga faa’iideeyaan dalka iyo dalka.
Gabagadii Wasiirka waxuu furay in waxii su’aal ah uu diyaar u yahay in uu ka jawaabo. Xafladda waxuu ku dhammaaday si farxad leh.